Bariga Afrika – Page 10 – Dawladnimo News
Home » Wararka » Bariga Afrika (page 10)
January 29, 2017	Comments 790 Views
January 29, 2017	Comments 917 Views
12 Musharax oo buuxiyey shuruudihii qaadashada Shahaadada Musharaxnimada
January 29, 2017	Comments 957 Views
Diiwaangalinta Musharaxiinta ayaa bilaabatay January 26, 2017, ayaa Guddiga Doorashooyinka heer Madaxweyne ay sheegen in diiwaangalinta Musharaxiinta ay ku egtahay maanta oo Axad ah kuna beegan January 28, 2017. Guddiga ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay is diiwaangaliyeen musharaxiin dhan 12 oo uu ku jiro Madaxweynaha uu wakhtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud. Musharaxiinta is diiwaangalisay ayaa waxaa laga qaaday ...
Alshabaab oo qabsatay xero ay leeyihiin ciidamada Kenya
January 27, 2017	Comments 907 Views
Dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa qabsaday sladhigii ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee magaalada Kulbiyow ee J/Hoose, oo 18 km u jirta xuduudda Kenya, sida ay dadka deegaanka u sheegeen VOA. Tobaneeyo dagaalyahanada Al-Shabaab iyo ciidamada ah ayaa la rumeysan yahay in weerarka lagu dilay hase yeeshee weli lama xaqiijin tirada rasmiga ah. Wararka ayaa sheegaya in guddoomiyihii degmadaasi Maxamed ...
Qarax weyn oo dhulka dhigay Hotel Dayax, Muqdisho
January 25, 2017	Comments 1,131 Views
Waxaa kordhaya khasaaraha ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay hotel Dayax oo ku yaala agagaarka Hotelka Wehliye ee magaalada Muqdisho. Dhismaha Hotelka iyo dhismayaal kale oo ku yaala agagaarka hotel Dayax ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan oo ka dhashay qaraxa koowaad. Markii dableyda gudaha ay u galeen dhismaha hotelka ayaa waxaa xigay qarax kale oo ka dhacay goobta, ...
Maraykanka oo lagasoo musaafuriyey Soomaalidii u badnayd
January 25, 2017	Comments 533 Views
Dadkan oo laga soo dejiyay garoonka dayaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli uu Madaxweyne Donald Trump la filayo inuu saxiixo amar shuruuc adag ku soo rogaya oo wax looga qabanayo dadka soogalootiga ah ee sida sharci darrada ah ugu sugan Mareykanka, oo ay ku jirto dal-ku-galka laga joojiyo dadka u dhashay Suuriya iyo ...
Gudiga Doorashada oo gudoomiye doortay soona saaray jadwalka doorashada
January 25, 2017	Comments 1,239 Views
Guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo maalintii shalay lagu dhawaaqay ayaa isla maanta shaaciyay jadwalka doorashada madaxweynaha Soomaaliya, kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Gudiga ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha la qabanayo 8bisha Fabaarayo oo maalmo kooban uu ka harsan tahay. Gudiga ayaa maanta guddoomiye u doortay xildhibaan C/raxmaan Ducaale Beylle. Dhugo jadwalka doorashada:
Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah oo gudoon doortay
January 22, 2017	Comments 1,225 Views
Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa loo doortay Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Barlamanka Federaalka Somalia, kadib coday Xildhibaanadu ka sameeyeen magaalada Muqdishu. Kursiga Gudoomiyaha Golaha aqalka sare oo ay u tartamay Labo Murashax oo lagu kala magacaabo Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mustaf Maxa’ed Qoodax goor dhaweyd soo idlaatey, waxaana guushu raacday mudane Xaashi. Doorashada waxaa cododkooda dhiibtay 52 Xildhibaan, waxaana wareegga 1-aad ...
Farmaajo muxuu ilaa hadda u waayey Dawlad calmata?
January 22, 2017	Comments 2,214 Views
In kasta oo ay adag tahay in aad rumaysato inuu jiro musharax maanta Soomaaliya madaxwayne ka noqon kara oo aan haysan taageero dibadeed , haddana waxaa aad loogu badiyaa in ilaaa hadda aanay jirin dawlad gadaal ka taagan musharax Max’ed Cabdullahi Farmaajo . Waxaana dad badan aaminsanyihiin inuu yahay Musharax marka laga yimaado shacabka Soomaalida , aan taageero la sheego ...
Maxay Kenya iyo Imaaraadku ku Calmadeen Cumar Cabdirashid?
January 21, 2017	Comments 899 Views
Ma jirto xog 100% lagu kalsoonaan karo oo ka hadlaysa sababaha labadaas dal ay ku taageerayaan CCC , laakiin waxaa la odorosi karaa sababaha soo scoda qaybo ka mid ah midkood inay ka dameeyaan taageerada labada dal ee ku aadan CCC, ama ha fuliyo haduu soo baxo ama yaanu u fulin. Sababaha Kenyaaanka 1- In wax ka jiri karaan eedaymaha ...